Dagaalka Azerbaijan iyo Armenia oo Muujiyey Awoodda Milatari ee Dalka Turkiga - SomalilandPost
Home News Dagaalka Azerbaijan iyo Armenia oo Muujiyey Awoodda Milatari ee Dalka Turkiga
Xogo soo ifbixiyey Dagaal dadban oo dhexmaray militariga Turkiga iyo Ruushka
Tuulada Dadivank, ee ku taalla gobolka buuraleyda ah ee Caucasus oo ah meesha ay ku yaallaan dalalka Aremenia iyo Azerbaijan, ayaa ah mid soo jirtay 800 oo sano waxaana ku yaalla dhismooyiin qadiimi ah.
Waxaa goobtaasi sidoo kale ku dhagan boodh uu ku sawiran yahay, baadarigii reer Armenia ee lagu magacaabi jiray, Aabe Hovhannes, waxaana goobta ku qoran, “waad ku mahadsan tahay in aad halkan timaado,” isaga oo dhoolacadeynaya.
“Waxaan haystaa amar ah inaan ka hortagno in goobtan qadiimiga ah la burburiyo,” waxaa sidaasi yidhi askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee Ruushka ee halkaas jooga.
Dowladda Ruushka ayaa dagaal qadhaadh oo ka dhacay gobolkii lagu muransanaa ee Nagorno-Karabakh ka dib, waxay halkaas u daad-gureysay 2,000 oo ah ciidamo nabad ilaalin ah oo heshiiska qeyb ka ahaa.
Ciidamadan waxay difaacayaan dadka asalkoodu yahay Armenia, Balse shacabka ku sugan magaalada Getavan, kuma faraxsana inay askartan arkaan.
Dalka Ruushka waxay ciidamo ka joogaan dalka Moldova. Askarta Ruushka ayaa halkaasi u jooga si nabad ilaalin ah.